Anarana - Wikipedia
Ny anarana dia teny na andian-teny enti-manondro na milaza zavatra, manana aina na tsy manana aina, hita maso na tsy hita maso, azo tsapain-tanana na tsy azo tsapain-tanana, na toerana na fotoana. Raha ilazana sokajin' olona na biby na zavatra na hevitra sns mitovy toetra ny anarana dia izany no atao hoe anarana iombonana. Raha anondroana singan' olona na biby na zavatra na hevitra sns manokana ny anarana dia izany no atao hoe anaran-tsamirery. Ny tarika foronin' ny anarana sy ny teny na andian-teny mameno azy no anatao hoe "tarika anarana".
1 Ny anarana araka ny fitsipiteny sy ny haifiteny
1.1 Sokajin' anarana
1.1.1 Anarana iombonana sy anaran-tsamirery
1.1.2 Anaran' ny azo tsapain-tanana sy anaran' ny tsy azo tsapain-tanana
1.1.3 Anaran' ny azo isaina sy anaran' ny tsy azo isaina
1.1.4 Anaran' ny manana aina sy anaran' ny tsy manana aina
1.1.5 Anaram-bondrona sy anaran-tsinga
1.2 Toetra ara-pitsipitenin' ny anarana
1.2.1 Filaza isa
1.2.2 Kilahivavy sy kilasin'anarana
1.2.3 Endrika araka anjara asa
1.2.4 Fiovan' endrika noho ny antony hafa
1.3 Fiforonan' ny anarana
1.3.1 Arana fototeny
1.3.2 Anarana sampateny
1.3.3 Anarana kamban-teny
1.3.4 Anarana avy amin'ny fiovana sokajin-teny
1.4 Fandrafetana andian-teny misy anarana
1.4.1 Fampiasana mpanoritra
1.4.2 Fampiasana mpampiakin-teny
1.4.3 Sokajin-teny hafa afaha miaraka amin'ny anarana
1.5 Anjara asan'ny anarana
1.5.1 Anjara asa am-pehezanteny
1.5.2 Anjara asa anaty tarika
Ny anarana araka ny fitsipiteny sy ny haifitenyHanova
Arakaraka ny fiteny heverina dia azo faritana amin' ny vondron' anjara asa azony sahanina na ny endrika mety hisehoany na ny hevitra mety hampitainy ny anarana, amin' ny maha sokajin-teny azy.
Arakaraka ny fiteny no anasokajiana ny anarana ary mety hisy vokany eo amin' ny endriny sy ny fampiasana azy am-pehezanteny na amin' ny fomba fanoratra izany sokajiny izany.
Anarana iombonana sy anaran-tsamireryHanova
Ny anarana dia mety ho anarana iombonana na anaran-tsamirery. Ny anaran-tsamirery dia matetika soratana manomboka amin' ny sora-baventy ho an' ny fiteny mampisasa abidy manavaka ny sora-madinika amin' ny sora-baventy. Maro ny fiteny ampiasana abidy tsy manavaka ny sora-baventy amin' ny sora-madinika ka isan' izany ny fiteny mampiasa ny abidy hebreo, ka ny hevitr' ilay anarana no ahalalana na anarana iombonana na anaran-tsamirery.
Anaran' ny azo tsapain-tanana sy anaran' ny tsy azo tsapain-tananaHanova
Ny anarana dia mety ho anaran-javatra azo tsapain-tanana na tsy azo tsapain-tanana, mety ho anaram-bondrona na anaran-tsinga.
Anaran' ny azo isaina sy anaran' ny tsy azo isainaHanova
Misy koa ny anaran' ny azo isaina sy ny anaran' ny tsy azo isaina ho an' ireo fiteny manavaka ny endrika milaza tokana sy milaza maro sns. Amin' ny fiteny sasany dia ilaina amin' ny fifehezana ny fampiasana azy ny mahafantatra ny anaran' ny azo isaina sy ny anaran' ny tsy azo isaina.
Anaran' ny manana aina sy anaran' ny tsy manana ainaHanova
Misy koa ny fiteny manavaka ny anaran' ny manana aina sy ny anaran' ny tsy manana aina raha toa ka misy fiantraikany amin' ny fampiasana azy am-pehezanteny izany. Amin' ny fiteny sasany dia ilaina amin' ny fifehezana ny fampiasana azy ny mahafantatra ny anaran' ny manana aina sy ny anaran' ny tsy manana aina.
Anaram-bondrona sy anaran-tsingaHanova
Misy koa ny atao hoe anaram-bondrona izay anarana manondro zavatra maro miaraka, sy ny anaran-tsinga izay anarana ilazana sigan-javatra mahaleo tena. Amin' ny teny frantsay dia tsy mitaky endrika filaza maro, amin' ny ankapobeny, amin' ireo teny mamaritra azy na ny matoanteny itanany anjara asa lazaina, ny anaram-bondrona ampiasaina amin' ny endrika milaza tokana. Ao amin' io fiteny io dia anaram-bondrona ny hoe population ("mponina") fa anaran-tsinga kosa ny hoe habitant ("mponina") araka ny ohatra omena eto:
La population de cette ville s'est déplacée ("Nifindra ny mponina ao amin'io tanàna io").
L'habitant de cette ville s'est déplacé ("Nifindra ilay mponina ao amin'io tanàna io").
Les habitants de cette ville se sont déplacés ("Nifindra ny mponina ao amin'io tanàna io").
Ny anaram-bondrona ao amin' ny fiteny iray dia mety ho anaran-tsinga ao amin' ny fiteny iray hafa ary misy ny fiteny tsy manavaka ara-pitsipiteny an' izany. Ny anarana hoe fianakaviana, izay tokony ho anaram-bodrona, dia tsy avahan' ny fiteny malagasy ho anaram-bodrona na anaran-tsinga raha araka ny fitsipiteny (tsy toy izany ny anarana hoe firenena) satria azo atao ny miteny hoe:
Faly ny fianakavianay iray manontolo (vondrona iray)
Faly ny fianakavianay rehetra (singa maro)
nefa tsy mitovy hevitra ireto fehezanteny roa ireto:
Faly ny firenena iray manontolo (singa tokana).
Faly ny firenena rehetra (singa maro)
Toetra ara-pitsipitenin' ny anaranaHanova
Ankoatry ny mety maha teny tokana na andian-teny ny anarana dia misy koa toetrany ara-pitsipiteny izay miankina amin' ny zavatra tondroiny na ny fampiasana azy anaty fehezanteny.
Mety hiovaova endrika na handray marika arakaraka ny isan' ny zavatra tondroina aminy ny anarana (tokana, maro, sns) nefa tsy ny fiteny rehetra no ahitana izany. Izany no atao hoe filaza isa. Amin' ny fiteny sasany dia ilaina amin' ny fifehezana ny fampiasana azy ny mahafantatra ny endrika milaza tokana sy ny endrika milaza maro sns. Ohatra, ao amin' ny fiteny frantsay dia milaza tokana ny anarana hoe cheval ("soavaly iray") fa milaza maro kosa ny hoe chevaux ("soavaly maro"). Ao amin' ny fiteny sasany toy ny fiteny bretôna, ny fiteny litoaniana, ny fiteny slôvena, ny fiteny soràba, ny fiteny sanskrita, ny fiteny hebreo ary ny fiteny arabo dia ahitana koa ny endrika milaza roa. Misy aza ny fiteny ahitana ny endrika milaza telo na milaza efatra.
Kilahivavy sy kilasin'anaranaHanova
Mety hiovaova endrika na handray marika araka ny sokajin-javatra tondroiny (kandahy, kambavy, tsy kandahy tsy kambavy; olona, zavatra, sns) nefa tsy ny teny rehetra no ahitana izany. Io no atao hoe kilahivavy. Ao amin' ny fiteny frantsay ohatra dia kandahy ny anarana hoe prince ("andriandahy") fa ny hoe princesse ("andriambavy") kosa dia kambavy.
Ao amin' ireo fiteny banto dia ahina ny atao koe kilasin' anarana izay mamondrona ny anarana anaty sokajy izay fantatra amin' ny fisian' ny mari-tsokajy (hasin-teny) izay mikambana amin' ny anarana. Ny fiteny soahily dia ahitana kilasin' anarana 15, ny fiteny sesôtô ahitana kilasin' anarana miisa 18, ary ny fiteny loganda ahitana 19 ka ao ny milaza olona, ny milaza biby, ny milaza toerana sns.
Isan' ny sokajin' anarana fehezim-pitsipiteny amin' ny fiteny sasany koa ny maha anaran' ny manana aina na anaran' ny tsy manana aina ny anarana iray. Ao amin' ny fiteny anglisy dia ilaina ny mahalala ny maha anaran' ny manana aina na anaran' ny tsy manana aina ny anarana iray mba hahafahana manolo azy amin' ny mpisolo it ("izy" na "izany" tokana tsy manana aina tokana) na ny he/she ("izy" tokana manana aina).
Endrika araka anjara asaHanova
Mety miovaova endrika na handray marika arakaraka ny anjara asa sahaniny ao amin' ny fehezanteny ny anarana ka mety koa hanovaova araka izany ny endriky ny mpamari-toetra na ny matoanteny miaraka aminy (raha mitana anjara asa lazaina na fameno na hafa izy, arakaraka ny fiteny). Ao amin' ny fiteny indô-eorôpeana toy ny fiteny grika sy ny fiteny latina, ohatra, dia miova endrika ny fiafaran' ny anarana arakaraka ny sokajin' anjara asa sahaniny ao amin' ny tarika na ny fehezanteny.
Ny fiteny indô-eorôpeana toy ny fiteny sanskrita, ny fiteny slava (fiteny rosiana sns), ny fiteny latina, ny fiteny grika, ny fiteny islandey, ny fiteny feroiana ary ny fiteny alemàna. Ny anarana amin' ny fiteny rômana toy ny fiteny frantsay sy ny fiteny espaniôla sns dia tsy ahitana an' izany. Ny fiteny semitika toy ny fiteny akadiana sy ny fiteny arabo dia ahitana izany koa. Ny anarana amin'ny fiteny hebreo dia tsy ahitana izany na dia isan' ny fiteny semitika aza. Ny anarana ao amin' ny fiteny maro dia tsy ahitana izany endrika araka anjara asa izany izay tsy hita afa-tsy ao amin' ireo mpisolo tena (amin' ny fiteny malagasy: izaho raha lazaina, ahy raha fameno, sns; amin' ny fiteny frantsay: il/elle raha lazaina: le/la raha fameno mivantana; lui raha fameno tsy mivantana; se raha fameno mitampody sns).
Fiovan' endrika noho ny antony hafaHanova
Mety hiovaova endrika na handray marika araka ny antony hafa toy ny filazam-potoana ny anarana, nefa tsy ny fiteny rehetra no ahitana izany. Ny anarana amin' ny fiteny malagasy dia afaka madray mari-potoana: asiana mari-potoana hoavy ny anarana nefa tsy mila matoanteny andry (ohatra: olona vs ho olona).
Fiforonan' ny anaranaHanova
Mety ho fototeny na sampan-teny na andian-teny ny anarana.
Mety ho fototeny ny anarana. Ny anarana fototeny dia mety hahazoana matoanteny sampan-teny na mpamari-toetra sampan-teny, na sokajin-teny hafa.
Raha sampan-teny izy dia mety miforona avy amin'ny sokajin-teny hafa ka ilazana ny anaran'ny asa na ny anaran'ny fitaovana na ny anaran'ny mpanao na ny anaran'ny toetra sns. Izany sokajin-teny nisampanany izany dia mety ho matoanteny, na mpamaritoetra na hafa. Mety ho amin'ny alalan'ny fanovonana na fanovanana na fanatsofohana tsirinteny izany.
Mety anarana samy anarana no akambana na anarana sy teny avy amin'ny sokajy hafa. Tsy misy eto na fanovonana na fanovanana na fanatsofohana tsirinteny.
Anarana avy amin'ny fiovana sokajin-tenyHanova
Mety hampiasaina ho anarana ny teny iray tsy isan'ny sokajy anarana na dia tsy nasampana aza. Mety ho matoanteny na mpamari-toetra na sokajin-teny hafa izany.
Fandrafetana andian-teny misy anaranaHanova
Misy ireo fiteny mampiasa mpanoritra miaraka amin'ny anarana hahafaha-mampiasa azy ara-pitsipika ao amin'ny fehezanteny na andian-teny iray. Misy ny fiteny tsy mila izany noho ny tsy fananany an'ilay mpanoritra.
Mety hiaraka amin'ny mpampiankin-teny koa ny arana iray mba hahafahany hiditra amin'ny andian-teny iray na hamorona andian-teny miaraka amin'ny teny iray faha. Nefa mety tsy ilaina izany arakaraka ny fiteny na mety tsy manana mpampiankin-teny ilay fiteny.
Sokajin-teny hafa afaha miaraka amin'ny anaranaHanova
Afaka mikambana amin'ny mpamari-toetra ny anarana.
Anjara asan'ny anaranaHanova
Misy ny anjara asa anaty fehezanteny ary ao koa ny anjara asa anaty tarika.
Anjara asa am-pehezantenyHanova
Ao amin'ny fehezanteny, amin'ny lafiny endrika dia mety hisahana anjara asa lazaina na fameno na entimilaza koa aza ny anarana. Amin'ny lafiny hevi-teny dia afaka misahana anjara asa (tsinjara asa) mpanao na iharana na toe-javatra sns ny anarana. Amin'ireo fiteny tsy mila matoanteny andry dia afaka misahana anjara asa entimilaza avy hatrany ny anarana.
Anjara asa anaty tarikaHanova
Ao anaty tarika dia mety ho loha-tarika ny anarana ka ahazoana tarika anarana, na mety ho famenon'ny teny hafa (anarana, mpamari-toetra, tambinteny, mpampiankin-teny, matoanteny, sns).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Anarana&oldid=999172"
Dernière modification le 20 Desambra 2020, à 08:44
Voaova farany tamin'ny 20 Desambra 2020 amin'ny 08:44 ity pejy ity.